GravityZone Ultra Plus - Bitdefender Myanmar
Endpoint, Cloud နှင့် လူသား တိုင်းအတွက် အကာအကွယ်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် တုံ့ပြန်ခြင်း
SOLUTION များ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
အဖွဲ့အစည်း၏ ဆိုက်ဘာ ခံနိုင်စွမ်းရည်အား တိုးမြှင့်ပေးပြီး တိုက်ခိုက်မှုများအား အောင်မြင်စွာ ရပ်တန့်ပေးသည့် ပေါင်းစည်းထားသော solution ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဆင့်မြင့်ဆုံး ကာကွယ်မှု တတ်စွမ်းနိုင်ခြင်းများ၊ အကုန်အကျသက်သာသော EDR (Endpoint Detection and Response) နှင့် Network Traffic analytics တို့နှင့် ပေါင်းစည်းထားသည်။ GravityZone Ultra Plus သည် Endpoint များပေါ်တွင် သို့မဟုတ် ကွန်ယက်ထဲတွင် သို့မဟုတ် Cloud ထဲတွင် အစရှိသော infrastructure ထဲရှိ မည်သည့်နေရာမှမဆို ပေါ်လာနိုင်သည့် အဆင့်မြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား အောင်မြင်စွာ ရင်ဆိုင်ရန် ကွန်ယက်အဖြစ်အပျက်များ (XDR) ပါဝင်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် မူရင်း EDR တစ်ခု၏ endpoint အခြေပြု ခြိမ်းခြောက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း တတ်စွမ်းနိုင်မှုများကို တိုးချဲ့ထားပေးသည်။
အဆင့်မြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား စောစီးစွာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းပေးသည်
AI နှင့် လုံခြုံရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် အဆင့်မြင့် တိုက်ခိုက်မှုများအား စောစီးစွာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရန် နှင့် ပိုမိုစိတ်ချရသော အဖြစ်အပျက်သတိပေးချက်များအား ပေးရန် အသုံးပြုသူပတ်ဝန်းကျင်မှ စုဆောင်းရရှိသည့် ကမ္ဘာတဝှမ်း ခြိမ်းခြောက်မှု အသိဉာဏ် နှင့် အချက်အလက်များကို ဆက်စပ်ပေးသည်။
၃၆၀ ဒီဂရီ မြင်နိုင်စွမ်း နှင့် အနေအထားအား ပံ့ပိုးပေးသည်
ကွန်ယက်ထံ ဆက်သွယ်ထားသည့် လုပ်ငန်းဌာနများ၊ ဆာဗာများ၊ cloud လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်မဲ့စက်များ Bring Your Own Device (BYOD) သို့မဟုတ် endpoint အေးဂျင့် (IoT) တစ်ခုအား ထောက်ပံ့ထားခြင်းမရှိသည့် စက်များ နှင့် အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် လုံခြုံရေးမြင်သာမှုများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက် ခြိမ်းခြောက်မှုများ မြင်သာမှုကို ပေးသည်။ ဆက်လက်ရှိနေသော endpoint နှင့် အသုံးပြုသူအပြုအမူဆိုင်ရာအန္တရာယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ အန္တရာယ်ထွက်ပေါ်မှု လျော့နည်းစေရန် လုံခြုံရေးအနေအထားထိန်းချုပ်မှုကို တတ်စွမ်းပေးသည်။
ထိရောက်သော အဖြစ်အပျက်တုံ့ပြန်မှုအား သေချာစေသည်
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများအတွက် မြန်ဆန်သော အဖြစ်အပျက်များဖြေရှင်းခြင်း နှင့် လျင်မြန်သောပြန်လည်ရယူမှုတို့အတွက် ညွှန်ပြထားသည့်တုံ့ပြန်မှု နှင့်အတူ ပြီးပြည့်စုံသော အလိုအလျောက် စက်ယန္တရားများအား ပေါင်းစည်းထားသည်။
ကမ္ဘာ့ အထိရောက်ဆုံး ENDPOINT ကာကွယ်မှု
ပေါင်းစပ်ထားသည့် GravityZone Ultra Plus လုံခြုံရေး အေးဂျင့်သည် အဆင့်မြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား အောင်မြင်စွာ ပိတ်ဆို့ရန် နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အကုန်အကျများသည့် ချိုးဖောက်မှုများကို ရှောင်ရှားရာတွင် ကူညီရန် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများ၏ အလွှာပေါင်း ၃၀ ကျော်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှု အစု ဖြစ်သည်။
အကုန်အကျသက်သာသည့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှု နှင့် တုံ့ပြန်မှု
ရိုးရှင်းမှု နှင့် လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ဖန်တီးထားသည့် GravityZone Ultra Plus သည် သီးသန့် EDR ထုတ်ကုန်များ အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး ဆူညံနေကြစဉ် တမူထူးခြားထိုးထွက်နေသည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အားစိုက်မှု နှင့် ဝန်ထမ်းကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များအား လျော့ချပေးရန် လုံခြုံရေးသတိပေးချက်များ၏ အသိဉာဏ်အရေးပါမှု နှင့် ညွှန်ကြားထားသည့် အဖြစ်အပျက်တုံ့ပြန်မှုတို့ကို ပေါင်းစည်းထားသည်။
IOT နှင့် BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) ကာကွယ်မှု
NTSA ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့် GravityZone Ultra Plus သည် အဖွဲ့အစည်းများအား IoT နှင့် Bring Your Own Device (BYOD) ကဲ့သို့သော အေးဂျင့်-အခြေပြု လုံခြုံရေးအား ထောက်ပံ့မပေးသည့် စက်များကိုပင် အကာအကွယ်ပေးရန် ကူညီပေးရင်း လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာအားလုံးကို လေ့လာမှတ်သားပြီး ခြေရာခံပေးသည်။
ENDPOINT နှင့် လူသား အန္တရာယ်-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အလေးပေး လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ခြင်း
ထည့်သွင်းထားသည့် အန္တရာယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အင်ဂျင်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ရယူမှု၊ နားလည်ရလွယ်ကူသည့် အဓိကထားစာရင်းနှင့်အတူ endpoint စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု၏ လုံံခြုံရေးတင်းကြပ်ခြင်းတို့ကို တတ်စွမ်းစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအတွင်း ဝင်ရောက်ရာတွင် စကားဝှက်မဖြည်ထားသည့် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ အသုံးပြုခြင်း၊ အားနည်းသော လှို့ဝှက်ကုဒ် ထိန်းချုပ်မှု၊ အပေးအယူလုပ်ထားသည့် USB များ အသုံးပြုမှု၊ ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုသူကူးစက်ခံရခြင်းများ အစရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းအပေါ် လုံခြုံရေး အန္တရာယ်တစ်ခု ကျရောက်စေသည့် အသုံးပြုသူလုပ်ရပ်များ နှင့် အပြုအမူများအား လေ့လာစီစစ်ပေးသည်။
လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်မှုများ၏ ရိုးရှင်းမှု နှင့် အလိုအလျောက်ဖြစ်ခြင်းသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အန္တရာယ်ကျရောက်မှု နှင့် တိုက်ခိုက်မှုမျက်နှာပြင်တို့အပေါ် ထိရောက်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သော လျော့ချခြင်းတစ်ရပ်ကို သေချာစေသည်။
END-TO-END လုံခြုံရေး အဖြစ်အပျက်များ မြင်သာမှု
(Endpoint, ကွန်ယက် နှင့် Cloud) infrastructure အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး ခြုံငုံပါဝင်သည့် Pre နှင့် Post အပေးအယူပြု တိုက်ခိုက်ခြင်းမြင်သာမှုသည် လုံခြုံရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အရာများအား ပိတ်ဆို့ထားသည့်တိုက်ခိုက်မှုများ နှင့် ဆက်လက်ဖြစ်နေသော သံသယရှိဖွယ် လုပ်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် root cause ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် တတ်စွမ်းစေသည်။
အချက်အလက် ချိုးဖောက်မှုများအား ရှောင်ရှားခြင်း
အဆင့်မြင့်တိုက်ခိုက်မှုများအား စုံစမ်းထောက်လှမ်းရန်ခက်ခဲသည်မှာ ၎င်းတို့သည် သာမန်အပြုအမူကဲ့သို့ သီးခြားစွာ ပုံပေါ်သည့် tool များ၊ နည်းစနစ်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ပုံများ (TTPs) အား ဖြန့်ကျက်သည်။ အဆင့်မြင့်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုသည် အကုန်အကျများသည့် ချိုးဖောက်မှုတစ်ခု၏အန္တရာယ်ကို သိသာစွာတိုးစေနိုင်သည့် လပေါင်းများစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိပဲ ရှိနေနိုင်သည်။ Ultra Plus တွင် အစောပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းပေးခြင်းဖြင့် အခြားနည်းပညာများမှ ထုံးစံအားဖြင့်သတိမထားမိသော soft indicator များ၏ ထောက်လှမ်းမှုကို တတ်စွမ်းစေသည့် အဖြစ်အပျက်ဆက်စပ်ခြင်းမော်ဒယ်များနှင့် အထူးပြု ML တို့ပါဝင်ထားသည်။
လုံခြုံရေး အဖြစ်အပျက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် တုံ့ပြန်မှု
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အရာများမှာ သတိပေးချက်တိုင်း ရရှိရန် နှင့် ထပ်ဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် အဓိကအရာများ သတ်မှတ်ရန် လုံလောက်သောအချိန် မရှိကြပေ။ အလိုအလျောက် သတိပေးချက်များအရေးပါမှုမှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အရာများသည် အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်၊ နားလည်နိုင်သည် ဆိုကြောင်း ရှင်းလင်းသောအဖြစ်တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် အရေးပါသောသတိပေးချက်များအတွက် အချိန်ကုန်ခြင်းအား လျော့ချပေးပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်သော အဖြစ်အပျက်တုံ့ပြန်မှုကို တတ်စွမ်းပေးသည်။
တိုက်ခိုက်မှု မျက်နှာပြင် ကျယ်ပြန့်လာမှု ကာကွယ်ခြင်း (IOT နှင့် BYOD ကာကွယ်ပါ)
ခေတ်သစ် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်များမှာ ရိုးရာ endpoint များ၊ Bring Your Own Device (BYOD)၊ smart စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ရောနှောထားသောအစုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Bitdefender Ultra Plus သည် IOT နှင့် Bring Your Own Device (BYOD) အပါအဝင် ကွန်ယက်ထံ ချိတ်ဆက်ထားသည့် endpoint များ အမျိုးအစားအားလုံးကို ထိခိုက်စေသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား ခြေရာခံခြင်းများအတွက် ကွန်ယက်လမ်းကြောကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုရန် ML နှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုအသိဉာဏ်တို့ကို အသုံးပြုထားသည်။
လုံခြုံရေး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ ရိုးရှင်းမှု
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာ အရည်အချင်းရှိ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းမှ ရှားပါးပြီး အကုန်အကျများသည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်နေစဉ် ရှုပ်ထွေးလာပုံပေါ်သည်။ Bitdefender မှ လုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ရှုပ်ထွေးမှု၊ လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအားထုတ်မှု နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်လိုအပ်ချက်တို့ကို လျော့ချရန် endpoint ၊ ကွန်ယက် နှင့် cloud တလျှောက် ပေါင်းစည်းထားသော ကာကွယ်မှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် တုံပြန်မှု တို့ကို ပေးထားသည်။
လုပ်ငန်းသုံး Endpoint များ
လုပ်ငန်းဌာနများ၊ Physical / Virtual ဆာဗာများ၊ Cloud အရင်းအမြစ်များ မှာ Bitdefender အေးဂျင့်အားဖြင့် ကာကွယ်ပေးထားသည်။
ကူးစက်ခံ endpoint များအား scan ဖတ်ပေးပြီး ပေါ်ထွက်လာသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား clean-up သို့မဟုတ် quarantine ဖြင့် ထားပေးသည်။
ကွန်ယက်လမ်းကြောအားလုံး၏ အပွားတစ်ခုအား mirror port တစ်ခုထံသို့ ပို့ပေးသည်။
Meta-အချက်အလက်အား ကွန်ယက်လမ်းကြောမှ ဆွဲထုတ်ပေးပြီး ၎င်းအား NTSA Appliance ထံ ပို့ပေးသည်။
အဆင့်မြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရန် Bitdefender Threat Intelligence ထံမှ အသိအမြင်များနှင့်အတူ ML နှင့် အပြုအမူဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြုထားသည်။
စဉ်ဆက်ဖြစ်နေသောအဖြစ်အပျက်များအပေါ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အမြင်တစ်ခု ရယူပြီး လုံခြုံရေး သတိပေးချက်များအား ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းပေးသည်။
Detection and Response solution များ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
ကွန်ယက် လမ်းကြော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများ
ဖြန့်ကျက်မှု နှင့် fine-tuning ဝန်ဆောင်မှု
MDR ဝန်ဆောင်မှုများ အတွဲလိုက် *
ဖြန့်ကျက်မှု နှင့် fine-tuning ဝန်ဆောင်မှု (အထူးထောက်ခံပေးသည်)
GRAVITYZONE ULTRA PLUS SOLUTION အကျဉ်းချုံး
SOLUTION အကျဉ်းချုံးအား ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်
GRAVITYZONE ULTRA PLUS နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုံး
နည်းပညာဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုံးအား ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်
မေးမြန်းစရာ ရှိနေပါသေးသလား ?
သင့်အတွက် မည်သည့် solution က သင့်လျော်သည်အပေါ် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အကူအညီ လိုအပ်ပါသလား ? Bitdefender Sales Team မှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးရန် ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိပါသည်။